Cantiques 7 BDS - Nnwom Mu Dwom 7 AKCB
Nnwom Mu Dwom 7:1-13
1Wo nan ne mpaboa yɛ fɛ,
Wʼanantu a wugyina so te sɛ abohemaa,
odwumfo nsa ano adwuma.
2Wo funuma yɛ kuruwa a enni nsa
a nsa pa wɔ mu bere biara.
Wo sisi yɛ atoko a wɔaboa ano
na sukooko atwa ho ahyia.
3Wo nufu te sɛ atwemma abien,
4Wo kɔn te sɛ asonse abantenten.
Wʼaniwa aba te sɛ Hesbon ntade
a ɛwɔ Bat Rabim pon nkyɛn.
Wo hwene te sɛ Lebanon abantenten
a ɛkyerɛ Damasko no.
5Wo ti si so sɛ Karmel Bepɔw.
Wo tinwi te sɛ adehyetam a wɔadi mu adwinni;
wo tinwi atenten no kyere ɔhene dommum.
6Wo ho yɛ fɛ, ɔdɔ,
wo ho yɛ anigye na ɛma ahomeka ara!
7Wo sibea te sɛ abɛ dua,
na wo nufu te sɛ aduaba kasiaw.
8Mekae se, “Mɛforo abɛ dua no;
na maso nʼaba mu.”
Wo nufu nyɛ sɛ bobe kasiaw,
na wo home mu hua nyɛ sɛ aprɛ.
9Na wʼanom hua nyɛ sɛ bobesa papa.
Ma bobesa no nkɔ me dɔfo hɔ tee,
ɛnsen mfa nʼanofafa ne ne se no so brɛoo.
10Meyɛ me dɔfo de,
na nʼapɛde ne me.
11Bra, me dɔfo; ma yɛnkɔ akuraa,
ma yɛnkɔda akuraa anadwo baako.
12Ma yɛnkɔ bobeturo mu ntɛm
nkɔhwɛ sɛ bobe no agu nhwiren,
sɛ nhwiren no apaapae,
anaasɛ ntunkum no ayɛ frɔmfrɔm.
Ɛhɔ na mede me dɔ bɛma wo.
13Adesaa yi ne hua,
na akɔnnɔduan nyinaa begu yɛn pon ano,
foforo ne dedaw,
a mede asie ama wo, me dɔfo.
AKCB : Nnwom Mu Dwom 7